ISilo sinxusa ukuba kube nokuthula - Ilanga News
Home Izindaba ISilo sinxusa ukuba kube nokuthula
ISilo sinxusa ukuba kube nokuthula
SINXUSE ukwehliswa kwemimoya nokuthula ezweni iSilo uMisuzulu KaZwelithini ngesikhathi sithula inkulumo yaso yokuqala esizweni samaZulu.
ISilo ebesethula inkulumo yaso Ondini ngoLwesithathu, besikhuza izigameko zakamuva zokulinyazwa nokuzitapela kwempahla okuqhubekayo, ikakhulukazi ezifundazweni iKwaZulu Natal naseGauteng.
Kulezi zinsuku ezisanda kudlula, ziyanda izigameko zokulinyazwa nokushiswa kwamabhizinisi ahlukene nosekuphoqe uhulumeni ukuba utshale amasosha kulezi zifundazwe.
ISilo ebesizinyaziswe wuNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, sizwakalise ukukhathazeka ngalezi zigameko, sathi okusikhathaza kakhulu wukuthi lokhu kuzoba nomthelela omubi kwezomnotho ozoshaya kakhulu abampisholo.
Sithe isizwe samaZulu siyaziwa ngenhlonipho nangokuzigqaja ngemvelaphi yaso. “Kubuhlungu ukubona abantu bakithi belimaza umnotho njengoba abantu abahlukumezeka kakhulu yilabo abahluphekayo,” kusho iSilo, sinxusa ukuba kube nokuthula.
Siqhube ngokuthi kuyadumaza ukubona abantu becekela impahla ephinde ibe wusizo emphakathini ngenxa yokungagculiseki ngezinto ezithinta ezombusazwe. Sinxuse isizwe samaZulu ukuba sihoxe ezigamekweni zokulinyazwa kwempahla futhi sivikele isithunzi saso esihle.
Sithe lezi zigameko zakamuva zakha isithombe esibi njengoba iningi labakhonjwa ngenjumbane kuzona kungamaZulu. ISilo siphinde sanxusa ukuba kube nobumbano phakathi kwamaZulu namaNdiya njengoba sekuqubuke imibiko yodlame olufufusayo phakathi kwalezi zizwe.
ISilo siphethe ngokukhuthaza ukuba luqhubeke ubumbano lweminyaka phakathi kwalezi zizwe njengoba iTheku linesibalo esikhulu samaNdiya ngaphandle kwasezweni laseNdiya.
Previous articleUsengumfundisi obedonsa ngobunkabi
Next articleAmaphoyisa alanda impahla eyebiwe emakhaya